Nhau - Hunhu uye zviyero zvehove dzakaumbwa mask muchina
Iyo mask mask inofanirwa kusangana neEU en149: 2001 P3 standard. Inonyanya kushandiswa kudzivirira guruva rakanyanya kunaka maindasitiri uye utsi hwesimbi panguva yekushambadzira. Vanopfuura 99% vavo vane filtration kunyatsoshanda, inova inokodzera nyoro uye inopisa nharaunda kana kupfeka dziviriro kwenguva yakareba; inokodzera kudzivirira guruva mukuvaka, kuchera matombo, machira, kukuya, kukanda simbi, mishonga, zvemagetsi, zvemishonga, kugadzira zvinhu nekukuya uye mamwe maindasitiri. Iyo zvakare ine yakanaka isina ivhu mhedzisiro pane jecha dutu.
Bangyin meyiki hove mhando maski muchina ndeye otomatiki muchina wekupeta chifukidzo muviri kugadzirwa. Iyo inoshandisa ultrasonic tekinoroji kusungira 3-5 zvidimbu zvePP isina-yakarukwa machira, yakamisikidzwa kabhoni uye firita zvinhu, uye inocheka kunze iyo yekupeta mask muviri. Zvinoenderana neakasiyana mbishi zvigadzirwa zvinoshandiswa, masiki akagadzirwa anogona zvakare kusangana nemhando dzakasiyana senge ffp1, FFP2, N95, nezvimwewo iyo tambo tambo yakasununguka isina-yakarukwa jira, izvo zvinoita kuti nzeve dzeiye anotakura dzive dzakanaka uye dzisamanikidzike. Iyo firita jira jira remaskiri ine yakanaka yekusefa maitiro, ayo anokwana zvakakwana iyo Asia kumeso chimiro, uye inogona kushandiswa kune yekuvaka, kuchera uye mamwe epamusoro kusvibiswa maindasitiri.
Mabasa uye hunhu hwehove mask muchina
1. Inogona kugadzirisa kupeta masiki muviri senge hove mhando yekupeta guruva masiki muchina, iyo inogona kugadziriswa kamwechete.
2. PLC otomatiki kutonga, otomatiki kuverenga.
3. Chiri nyore kugadzirisa mudziyo, zviri nyore kuwedzera refuel.
4. Iyo mold inotora kuburitsa uye kutsiva modhi, iyo inogona kukurumidza kutsiva chakuvhuvhu uye kugadzira mhando dzakasiyana dzemasikisi.
5. Aluminium alloy inoshandiswa mumushini wese, inoyevedza uye yakasimba isina ngura.
6. Yepamberi yekudyisa uye yekugamuchira chishandiso.
7. Yakakwirira kugadzikana uye yakaderera kutadza chiyero.
ir filter mask, kana kungoisa sefa mask. Simba rayo rinoshanda nderekuita mhepo ine zvinhu zvinokuvadza kusefetwa uye kucheneswa nemasefa emasikisi, wozofemerwa.
Mhepo inopa mhando yekufema inoreva kune yakachena mweya sosi yakasarudzika kubva kune zvinokuvadza zvinhu, zvinotumirwa kumeso kwemunhu kwekufema kuburikidza necatheter kuburikidza nemagetsi chiito senge mweya compressor, yakamanikidzwa gasi humburumbira mudziyo, nezvimwe.
Filter mhando masiki ndiyo inonyanya kushandiswa mukushanda kwezuva nezuva. Maitiro ekusarudza uye mashandisiro emasikisi akadaro anotsanangurwa zvakadzama pazasi. Maumbirwo eichi chifukidzo chinofanira kukamurwa muzvikamu zviviri. Imwe mutumbi mukuru wemask, iyo inogona kungonzwisiswa sefuremu remask; imwe ndiyo firita yezvinhu, kusanganisira firita donje rekudzivirira guruva uye kemikari firita bhokisi reanodzivirira hutachiona. Naizvozvo, pakusarudza uye nekushandisa mafirita emasikisi, zvimwe zvigadzirwa zveGuangjia zvinokupa zvinotevera, kureva kuti, unogona kushandisa imwechete mask muviri, uye kana uchida guruva-chiratidzo muguruva rinoshanda nharaunda, unogona kupfeka firita inoenderana, kuitira kuti iwe ugone kupfeka mask yeguruva; paunoda kuita gasi kudzivirira munzvimbo ine chepfu, chinja firita donje, uye mudziyo nazvo Iyo inoenderana nemakemikari firita bhokisi, saka inova gasi chifukidzo, kana zvinoenderana nebasa rako rinoda, kukupa iwe mamwe mabatanidzwa
Pfupi kuunzwa kwefaera zvinhu zvemaski
Iyo firita zvinhu zvemasikisi ekudzivirira zvinonyanya kuve zvakakamurwa muzvikamu zviviri, zvinoti guruva-chiratidzo uye anti-chepfu. Mabasa avo ndeekushambadzira maerosol anokuvadza, anosanganisira guruva, utsi, madonhwe emhute, magasi ane chepfu uye mhute ine chepfu, kuburikidza nemidziyo yekusefa, kuvadzivirira kubva pakufemerwa.
Iko kushandiswa kwemasikisi akajairwa, masiki anofanirwa kunge akaenzana saizi, kupfeka nzira inofanirwa kuve iri chaiyo, masiki anoshanda. Masiki anotengeswa pamusika anowanzo kuve akapatsanurwa kuita emakona mana uye akaumbwa kunge mukombe. Iyo rectangular mask inofanira kunge iine angangoita matatu marongero epepa dhizaini kuti ave neanodzivirira maitiro. Mushandisi anofanira kumanikidza waya pane iyo maski pane zambuko remhino, uyezve ndokuparadzira maski ese padhuze nezambuko remhino, kuti utambe chinobudirira. Vana vanogona kupfeka mamaki emakona ekuvhiya, nekuti haina chimiro chakamisikidzwa, kana chakasungwa zvakanaka, inogona kuve padyo nechiso chemwana. Iyo mask yakaumbwa nekapu inofanirwa kuve neshuwa kuti iyo diki yemasikisi inokwana mushure mekunge yakanamirwa kumeso, kuitira kuti mweya uri mumhepo usazodonhe kuitira kuti ubudirire. Paunenge uchipfeka maski yakaita mukombe, vhara iyo maski nemaoko maviri uye edza kufuridza. Tarisa uone kana paine mhepo inodonha kubva kumucheto kwemask. Kana iyo mask isiri yakasimba, iwe unofanirwa kugadzirisa chinzvimbo usati wapfeka.
Ndirini pandinofanira kuchinja mask
1. Chifukidziro chakashatiswa, sekusviba kweropa kana madonhwe
2. Mushandisi akanzwa kuti mweya wekufema wakawedzera. Guruva humbowo firita donje: kana iyo maski inokwana zvakanaka nechiso chemushandisi, kana mushandisi achinzwa kukuru kufema kuramba, zvinoreva kuti firita donje izere neguruva uye inofanirwa kutsiviwa.
3. Iyo maski yakanganisika
4. Pasi pemamiriro ekuti mask uye musuwo wevashandisi zvakavharwa zvakanaka, kana mushandisi achinhuwirira hwema hwehupfu, iyo masiki nyowani haifanire kupfekwa kwechinguva. Kubva pakuona kwehunhu hwepanyama hwevanhu, kutenderera kweropa remumhino mucosa kwakasimba kwazvo.
kuvhiya chifukidzo kugadzira muchina, kuvhiya kumeso mask kugadzira muchina, asiri dzakarukwa kumeso chifukidzo kugadzira muchina, hosipaipi yekuchina muchina, asiri rakarukwa chifukidzo kugadzira muchina, kumeso mask kugadzira muchina,